Man United oo Man City gurigeeda guuldarro ku dhadhansiisay - BBC News Somali
Man United oo Man City gurigeeda guuldarro ku dhadhansiisay
Image caption Paul Pogba (midig) iyo Chris Smalling ayaa dhaliyay goolasha ay Manchester United kaga badisay Man City
Kooxda Manchester City waxa xalay la soo deristay guul darro aanay meeshaba soo dhigan oo waxa Manchester United oo ay laba gool kaga horraysay kala daba timid saddex gool oo lama filaan ah, sidaana guushii ku raacday.
Goolashaa degdegga ah ee lagala daba yimid waxay Man City ka kala daadiyeen fantasiye ay u diyaar garoobeen kooxda iyo taageerayaasheeduba oo ahaa in ay u damaashaadaan hanashada Koobka Horyaalka Ingiriiska ee Premier League-ga waa haddii ay ciyaartaa xalay badin lahaayeen.
Jose Mourinho, tabobaraha kooxda Man United, ayaa isagoo ka hadlaya guushaa uu soo hooyey waxa uu sheegay in kooxdiisu mudan tahay ammaan iyo tixgelin, hadalkiisaasina waxa uu duur xul u ahaa dadka ka faalooda ciyaaraha oo beryahan dambe dhaliilayey qaab ciyaareedka kooxdan uu tabobaro ee Manchester United.
Sidoo kale waxa wararku ay sheegayaan in Mourinho doonayo in uu ku badesho labada ciyaartoy ee Paul Pogba iyo Anthony Martial weeraryahanka reer Brazil ee u safta kooxda Paris St-Germain, ee Neymar.
Pep Guardiola, oo isna tababara kooxda Manchester City, ayaa isla la filayaa in uu noqon doono tabobaraha ugu mushaharka badan dunida marka uu qandaraas cusub oo sannadkiiba 20 milyan oo giniga Istarliinka ah la saxeexdo kooxda Manchester City oo doonaysa in uu la sii joogo ilaa sannadka 2020-ka.